ကွန်ကရစ် Block ကိုစက်
QT4-15 Fully Automatic Concrete Block machine Just change the Mould can Produce different size blocks and pavers. Raw Material is Cement , sand , fly ash ,crushed stone and so on. Hydraulic system and PLC control , one production line 3-5 person. Working by hydraulic and Electricity. H...ဆက်ဖတ်ရန် »
September2afternoon,a14-meter-long trailer parked at the factory gate, waiting for loading brick equipment. Split machine Compared with the 6-type machine, the output of the 10-type machine is almost doubled. One board can produce 54 standard bricks, and each board only needs 15 seconds to ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Post ကိုအချိန်: Jun-03-2017
အတုကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချစေနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘိလပ်မြေအုတ်စက်တစ်အုတ်ကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမယ့်အခုအုတ်ဤပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရန်အလွန်လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်အင်ဂျင်နီယာများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အခွက်တဆယ်တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေးသော, အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်, ဘိလပ်မြေစနစ်ကစာနယ်ဇင်းထုတ်ဝေအထူးသဖြင့်လာသောအခါ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အစဉ်အလာ sintered အုတ်အသုံးပြုသောရွှံ့တွေအများကြီးလိုအပ်တယ်သောကြောင့်, လယ်ယာမြေမြေဆီလွှာကို source ကိုပိုပြီးတိုက်ရိုက်ပျက်စီးခြင်းအဘယ်သို့သောအခြင်း, လေထုပတ်ဝန်းကျင်ရန် sintered အုတ်ကိုမီးရှို့ကျောက်မီးသွေးထုတ်လုပ်မှုအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွင်းရှိမြေသယံဇာတ၏သမာဓိအားနည်းစေပြီးမသာ ဖြစ်ပေါ်စေ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဆိုပါအုတ်အုတ်စက်ဘိလပ်မြေအုတ်များ၏အုတ်ချမှတ်ခြင်းစက်မြင့်မားသောဖိအားစာနယ်ဇင်းစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, ဆွန်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှတဆင့် slag, slag, ပြာပျံသန်း, ထုံးကျောက်, သဲ, ကျောက်စရစ်, ဘိလပ်မြေနှင့်အခြားကုန်ကြမ်းများအသုံးပြုခြင်း, သိပ္ပံနည်းကျဖော်မြူလာ, ရေနှင့်အတူရောနှောဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်ရောင်စုံလမ်းအုတ်။ ဤသည်ကိရိယာများကို ...ဆက်ဖတ်ရန် »
နောဧသည်မိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းကိရိယာများစက်ရုံ Mianshaozhuanji ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနေဆဲသွားကြဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရှိပါတယ်
ကမ္ဘာ့အဓိကဆန်းသစ်အင်အားကြီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရှုထောင့်ကနေ, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုခြောဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏မူလမောင်းနှင်အားဖြစ်ပါတယ်။ တလက်, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုခေါင်းဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများတွင်, စျေးကွက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နေတဲ့ဦးခေါင်း, သိပ္ပံနည်းကျတစ်ဦးတံတားဖွင့်လှစ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ထားပြီး 2015 ကတည်းက Ningbo စီးတီး, Yinzhou Nuoya ဘိလပ်မြေပိတ်ပင်တားဆီးမှုစက်စက်ရုံ "စာနယ်ဇင်း", "နောဧသည်အရည်အသွေး, သင်တည်ဆောက်" ဟုအဆိုပါအသုံးပြုသူကိုရောက်စေဖို့နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဦးဆောင်, နောဧမိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းကိရိယာများစက်ရုံသာမကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, Single-စိတ်, စိတ်ရင်း မိုးသည်းထန်စွာတောက်ပနောဧသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
1, ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်နေဆဲဒေသခံရွှံ့အုတ်အသုံးပြုကြ, ရွှံ့အုတ်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့သလဲ ဖြေကြောင့်လူတစ်ဦးချင်းစီစိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ, စီးပွားရေးအဆင့်နှင့်အခွအေန၏အရင်းအမြစ်များကိုမှအချို့သောဒေသများနေဆဲရွှံ့အုတ်အသုံးပြုနေသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းဒေသခံအုတ်နှင့် ti ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Mianshaozhuanji: မည်သည့်စက်, စဉ်ဆက်မပြတ်၎င်း၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ဖြစ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုလျှော့ချမည်, အသုံးပြုမှုကိုရှေ့တော်၌ထိုဖောက်သည်ပြဿနာရဲ့အသီးအသီးစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့အုတ်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှနားလည်ပြီး, အချိန်မီအတွက် wear တစ်အချို့ဒီဂရီရောက်ရှိပြီးနောက်သင့်တယ် အဆိုပါ ef သေချာစေရန်ထုံးစံ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Ningbo Nuoya ဘိလပ်မြေအုတ်စက်စက်ရုံအုတ်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုသည်အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ: ရှစ်ပေါက်ပန်းကန် Mianshaozhuanji, အုတ်, 10-15 8-15 6-15, Mianshaozhuanji, အုတ် Mianshaozhuanji, 4-40 4-25, 4- 15 အုတ်အုတ်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစံခေတ်သစ်ရှိပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Unburned ဘိလပ်မြေနှင့်လက်တွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unburned ဘိလပ်မြေအုတ်စက်ကိုအလှဆင်ဖို့အုတ်အတုကုန်ကျစရိတ်လျှောက်လျော့နည်းစေနိုငျသောကွောငျ့, အလွန်အရေးကြီးသောအနေအထားရှိအခွက်တဆယ်တွေအများကြီးတစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာအုတ်များအတွက်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်တီထွင်နိုင်ပါတယ်မူရင်းလိုအပ်ပေမယ့်ယခုလည်းမရှိ တစ်အုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အရည်ဖိထားပါဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်မှု၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကပိုပြီးလေးနက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတိုးတက်; တရုတ်နိုင်ငံ၏ဗိသုကာဒီဇိုင်းအဆင့်ကိုသော်လည်းအဆောက်အဦးပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုအပေါ်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်အတူကွာဟမှု, အပိုကြီးပေမယ့်အရည်ဖိထားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦစွမ်းအင်ထိရောက်မှုပါစေ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဒီနေ့ရဲ့ကွမ်ကျိုး client ကို
အချိန်: 2016-06-12 အရင်းအမြစ်: Ningbo Yinzhou Nuoya Block ကိုစက်စက်ရုံဒီ post ကဒီဘာသာရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက် Cement, ဒီနေ့ရဲ့ကွမ်ကျိုး client ကိုငါ့ကိုအစကတည်းကမှ finish ကိုတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုလျော့နည်းထက်ဝက်ကျော်တစ်နာရီပြီးစီးလုယူသောအထင်အမြင်ကို ပေး. , လမ်းပေါ်တွင်အချိန်မဖြုန်းခဲ့ပါ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ပလက်ဖောင်းပေါ်အုတ်စက်ကိရိယာများတဲ့ professional ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါသည်
ပလက်ဖောင်းပေါ်အုတ်စက်ကိရိယာများလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြု 200 * 100 ကို * 60 သတ်မှတ်ချက်များ pavers ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလေယာဉ်သည်အရောင်အုတ်လမ်း, ဖိပန်းပွင့်-shaped အုပ်ကြွပ်သာလှပသောအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်မှို၏အစားထိုးတော်အားဖြင့်, Multi-ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးအစားပိုင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန်မသိဘဲပေးပို့ဖို့, ပျံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့အချိန်စာချုပ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, ငါတို့တက်ကြွစွာ, ဝယ်မှ prompt ကိုများနှင့်အချိန်မီပေးပို့စာချုပ်များ၏စည်းကမ်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်း, 20 ရက်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ကကျနော်တို့အစီအမံ, loadi ကောင်းတစ်ခုအကောင့်တစ်ဝက်ထရပ်ကားကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကြအစောပိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နှင့်ကြလိမ့်မည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သေးငယ်တဲ့အားလပ်ရက် Qingming ငါ့အကို client ရဲ့သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပါစေ
မိနစ်အနည်းငယ်ငါ့အကို client ရဲ့သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုနှင့်အတူအလွန်အကျွမ်းတဝင်မဖြစ်ပါစေသေးငယ်တဲ့အားလပ်ရက် Qingming, ကတယ်လီဖုန်းစကားပြောဆိုမှုအားဖြင့်ဖောက်သည်မှဖောက်သည်များလမ်းပြနေဆဲအလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့ဖောက်သည်တစ်ဦးလေ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ရက်အနည်းငယ်အကြာနှင့်ဤနံနက်ဒေတာမီ, ဖောက်သည် t ကိုပြောကြားခဲ့့သည်က ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အသုံးပြုမှု Mianshaozhuanji ထုတ်ကုန်ညစ်ညမ်းမှု၏ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာ, ဒါနိမ့်ဆုံးမှပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ထုတ်လုပ်သော။ ပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်မယ့်အလွန်လေးနက်သောသက်ရောက်မှုစေခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့် unburned ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏လျှောက်လွှာမှတဆင့်စွန့်ပစ်ပြန်လည်ရှိပါတယ်စေနိုင်သည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အရုပ်မျက်နှာနှင့်တူအစောပိုင်းနွေဦးရာသီဥတု, မတည်ငြိမ်သော။ စုံလင်သောကို arc ကြားမှတစ် parabola တူသောအပူချိန်, ဒါပေမယ့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကွေး, ဖြောင့်လိုင်းဒါမှမဟုတ်အအေး၏အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံရန်ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ဘက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်၏ထိုကဲ့သို့သော floating မိုးရွာရွာ၌, ဟန်ကျိုးသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ကော်ပိုရေးရှင်း Zoujing လီ Shuo VI နိုင်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Ningbo Yinzhou Nuoya Block ကိုစက်စက်ရုံ Cement, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းအတွက်ကျောရိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း On-line ကိုအောင်မြင်စွာချီးကျူးနေပါသည်!
အချိန်: 2015-09-14 Views: 10 အရင်းအမြစ်: Ningbo Yinzhou Nuoya Cement Block ကိုစက်စက်ရုံ Ningbo Yinzhou Nuoya Block ကိုစက်စက်ရုံ Cement, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းအတွက်ကျောရိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း On-line ကိုအောင်မြင်စွာချီးကျူးနေပါသည်! ဆက်ဖတ်ရန် »
E-လိပ်စာ 84, Gaoqiao West Road, Jiangnan Industrial Zone, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China
E-mail ကို: cgc5158@nbnuoya.com